राप्रपाकोे विरगञ्जमा केन्द्रीय बैठक बस्दै, यस्ता हुनेछन् एजेण्डा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राप्रपाकोे विरगञ्जमा केन्द्रीय बैठक बस्दै, यस्ता हुनेछन् एजेण्डा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोे विरगञ्जमा केन्द्रीय बैठक बस्ने भएको छ ।
आगामी ७, ८ र ९ गते बस्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष श्री कमल थापाको अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसी निम्न अनुसारको निर्णयहरु गर्ने भएको छ ।
जेष्ठ ७, ८ र ९ गते विरगञ्जमा हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । संगठनात्मक सुदृढिकरण कार्ययोजना पार्टी प्रवक्ता भुवन पाठकले प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रशिक्षण सम्बन्धि कार्ययोजना, केन्द्रीय सदस्य गोविन्द खनियाले प्रस्तुत गर्नेछन् ।
विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्य डा. विष्णु भण्डारीले प्रस्तुत गर्नेछन् । निर्वाचन परिणाम समिक्षा सम्बन्धि प्रतिवेदन माथि विस्तृत छलफल भयो र परिमार्जनका साथ पारित गरियो र विरगञ्जमा हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै राप्रपाले फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदहरुको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा रहने निर्णय गरेको प्रबक्ता भुवन पाठकले बताए ।